व्यापार सेटअप - EURUSD, XAUUSD र CADJPY (१ Total० कुल पिप्स) - Forex Lens
व्यापार सेटअप - EURUSD, XAUUSD र CADJPY (१ Total० कुल पिप्स)
आरपी फोरेक्स द्वारा अर्को प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग सत्रमा स्वागत छ। आजको लाइभ सेसनमा, हामी हिजोका विश्लेषण गरिएका तीन ट्रेडहरूको हालको स्थितिमा जान्छौं र ट्रेडहरू जुन हामी आजको सत्रमा लाइभ प्रवेश गर्यौं। यस हप्ता (र गत हप्ता) हामीसँग अझै कुनै घाटा छैन र यो त्यस्तो कुरा हो जसलाई विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग कोठामा हाम्रा सबै सदस्यहरू गर्व गर्छन्।
हिजोको प्रत्यक्ष ट्रेडिंग सत्रको बखत हामीले AUDJPY, AUDUSD र CADJPY का लागि ट्रेड सिग्नलहरू भेट्टायौं। दुई मध्ये तीन ट्रेडहरू उनीहरूको लागि खास प्रविष्टि शर्तहरूको रूपमा प्रवेश गरिएको थियो। हामीले एक CADJPY छोटोको लागि लाइभ विश्लेषण र प्रविष्टि गरेका थियौं र त्यस पछि जोडीले 60०० भन्दा बढी पिप्स ल्याएको छ। हाम्रो AUDJPY लामो सक्रिय भयो जब हामीले ब्रेक-रिटेस्ट-अस्वीकृति हाम्रो कुञ्जी स्तरबाट हटायौं। दुबै ट्रेडहरूले कुल १०० पिप्स र गणनाको लाभ प्रदान गर्‍यो।
आज, हामी एक प्रत्यक्ष तकनीकी विश्लेषण र XAUUSD गोल्ड र EURUSD को लागी संकेत कल गरेका थियौं। हाम्रो minute० मिनेट लाइभ सत्रको बखत, हामी सजिलैसँग दुबै ट्रेड सेटअपहरू पहिचान गर्न सक्षम भयौं हाम्रो मुल्य कार्य रणनीति प्रयोग गरेर। आदर्श रूपमा, हामी भोलीको गैर-फार्म पेरोल (NFP) समाचार विज्ञप्ति अघि यी ट्रेडहरूबाट बाहिर जान चाहन्छौं।
भोली, गैर-कृषि पेरोल (NFP) 8::30० AM EST मा रिलिज हुन्छ, हाम्रो प्रत्यक्ष सत्रको २ घण्टा अघि। बजारहरू रिलिज हुनु अघि र पछाडि एकदमै अस्थिर हुनेछ, त्यसैले कृपया होशियार रहनुहोस्। हामी NFP रिलिज, यो ट्रेडिंग हप्ता कसरी गए र अर्को हप्ताको लागि व्यापार संकेतहरू छलफल गर्नेछौं। भोलि भेटौं हाम्रो नि: शुल्क प्रत्यक्ष ट्रेडिंग सत्रको लागि। बिहान ११:०० बिहान EST मा सुरु भई हाम्रो ट्रेडिंग कोठा पोर्टलमा। सावधान र खुशीको व्यापार लिनुहोस्। यदि तपाईं अहिले सम्म हामीसँग सामिल हुनुभएको छैन भने, यो दिमागमा राख्नुहोस् हामी १ महिनाको मूल्यको लागि आज राती मध्यरातमा (१२:०० बिहान EST) पेश गर्दै छौं।
ट्रेडिंग कोठा पोर्टलमा लगईन गर्नुहोस् पूर्ण प्रत्यक्ष सत्र हेर्न
हिजोको लाइभ सेसन रिक्याप जाँच गर्नुहोस्: अक्टोबर 30th, 2019
यदि तपाईंले एकका लागि साइन अप गर्नुभएको छैन फोरेक्स ट्रेडिंग कोठा सदस्यता, तपाईं त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक।
अक्टोबर 31, 2019 /by Forex Lens समाचार
टैग: क्याडजेपी, मुद्रा व्यापार, EURUSD, विदेशी मुद्रा मूल्य कार्य, संकेत विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा व्यापार कोठा, सुन, सुन व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग, प्रत्यक्ष ट्रेडिंग, एनएफपी ट्रेडिंग, pips, मुनाफा, व्यापार सेटअप, xauusd
https://www.forexlens.com/wp-content/uploads/2019/11/FXL-Youtube-October-31-20191.jpg 720 1280 Forex Lens समाचार https://www.forexlens.com/wp-content/uploads/2018/01/forex-lens-logo-expert-forex-signals.png Forex Lens समाचार2019-10-31 12:04:152019-11-20 15:29:48व्यापार सेटअप - EURUSD, XAUUSD र CADJPY (१ Total० कुल पिप्स)
अमेरिकी डलर बुल्स फिर्ता छन्? + CADJPY र CADCHF ट्रेडहरू
COT रिपोर्ट बुलिश यूरो र बियरिस डलर संकेत गर्दछ
अमेरिकी डलर बुल्स कार्यमा फिर्ता? १ Gold०० संग गोल्ड फ्लर्टहरू
अमेरिकी डलर मनपराइएको सेफ हेवन + भालु बजार पुष्टि भयो
सकारात्मक ADP कार्य संख्याहरू तर DXY बायस अझै मिश्रित
फोरेक्स अमेरिकी चुनाव विश्लेषण - मार्केटमा बिडेन भारी मनपर्ने
विदेशी मुद्रा को बारे मा अधिक
DXY सकारात्मक बिक्री डाटा + AUDUSD को लागी लम्बित शॉर्ट्स मा उच्च धक्कासेप्टेम्बर 16, 2021 - 3: 48 अपराह्न
तेल Longs + बिटकॉइन बुल्स बाट २३० पिप्स $ ५०,००० को रैली को लागी सेट गर्नुहोस्सेप्टेम्बर 15, 2021 - 3: 08 अपराह्न
डलर बुल्स 92.500 + EURUSD Intraday शॉर्ट्स मा प्रवेश गरीएको प्रतिक्रियासेप्टेम्बर 14, 2021 - 4: 13 अपराह्न
डलर फिर्ता 92.500 + Bitcoin शॉर्ट्स यदि मूल्य ४४,००० भaches्गसेप्टेम्बर 13, 2021 - 3: 05 अपराह्न
USDCHF Intraday मुनाफा + AUDJPY शॉर्ट्स प्रवेशसेप्टेम्बर 9, 2021 - 4: 08 अपराह्न
जोन मोर्गनलाई सिरियसएक्सएम मा क्यानडा वार्ता १ 167 मा एन्ड्र्यू क्रिस्टलको साथ सुन्नुहोस्
विदेशी मुद्रा शीर्षकहरू
मानार्थ लाइभ सत्र
फोरेक्स ट्रेडिंग ब्लग
प्रत्यक्ष व्यापार कक्ष
मूल्य कार्य विश्लेषण - AUDUSD, AUDJPY र CADJPY साप्ताहिक लाभ रिक्याप + अर्को हप्ताको बजार आउटलुक